မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - -
Q.သွားစိုက်နည်း ဘယ်နှမျိုး ရှိပါသလဲ ဆရာ။
A. သွားစိုက်တယ်ဆိုတာက မိမွေးတိုင်း၊ ဖမွေးတိုင်း ပါလာတဲ့ သွားတစ်ချောင်းချောင်းကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် နုတ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ လစ်ဟာသွားတဲ့အတွက် ဒီအတိုင်းမထားချင်လို့ သွားကို စိုက်ကြပါတယ်။ နုတ်ရတဲ့ သွားက ရှေ့သွားဆိုရင် ရှေ့သွားက အပေါက်ကြီးလို ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီ နေရာမှာ သွားတစ်နေရာတည်းကို ထည့်ချင်ရင် နည်းလမ်းတစ်ခုက သွားအမြစ်ကို အမြစ်တုလေးထည့်ပြီး စိုက်လို့ရတယ်။ အဲဒီနည်းသုံးမယ်ဆိုရင် ခွဲရ၊ စိတ်ရတယ်၊ တန်ဖိုးအားဖြင့် ပိုကြီးတယ်၊ ခွဲစိတ်မှု ယူရ တယ်။ ဈေးတော်တော်ကြီးတဲ့အထဲမှာပါတယ်။
ဒါကို Dental Implant လုပ်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။
အဲဒီနည်းကို မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် ဒုတိယနည်း အနေနဲ့ ဘေးနှစ်ဖက်က သွားနှစ်ချောင်းကို တွဲပြီး တံ တားထိုးတဲ့ သွားစိုက်နည်းကို လုပ်လို့ရတယ်။ အဲဒီအခါ ဘေးနှစ်ဖက်က သွားတွေကို စားရတော့ နည်းနည်း ပါးသွားတတ်ပါတယ်။
ဒီနည်းကိုလည်း မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် တတိယနည်းကတော့ သွားကို အရှင်တပ်တဲ့နည်းလုပ်လို့ရပါ တယ်။ အံကပ်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒီအခါ သံငုတ် ဒါမှမဟုတ် ကော်ပြားနဲ့ တွဲရပါတယ်။
(၁) ခွဲစိတ်ပြီး သွားအမြစ်တုထည့်တဲ့နည်းက စိုက်လိုက်တဲ့ အံကပ်ဟာ လှုပ်ခြင်း၊ ပြုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ ၀ါးလို့ ပိုကောင်းပါတယ်။ သွားတစ်ချောင်း၊ နှစ်ချောင်း လစ်ဟာသွားရင် ဒီနည်းကို သုံးလို့ရပေမယ့် ခွဲစိတ်ရတာ ဈေးကြီးပါတယ်။
(၂) တံတားထိုးတဲ့ သွားစိုက်နည်းကျတော့ သွား တစ်ချောင်းတည်းမရှိတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ ဖြုတ်လို့၊ တပ်လို့ မရပါဘူး။ ဘေးသွားကို တိုင်လုပ်ရတော့ ဘေးသွားကို နည်းနည်းစားရတဲ့အတွက် နည်းနည်း ပျက်စီးပါတယ်။ ဒီနည်းလုပ်ရင် ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို အမြဲလုပ်ပြီး သွားဆရာဝန်နဲ့ အမြဲမှန်မှန်ပြနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) အရှင်တပ်ရင် အံကပ်ကို ဖြုတ်ပြီး ဆေးလို့ ရတယ်။ သွားအများကြီး မရှိရင် ဒီနည်းကို သုံးတာ များပါတယ်။
Q. သွားစိုက်ရင် ဘယ်လို သွားအမျိုးအစားကို စိုက်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။
A. သွားစိုက်တဲ့အခါမှာ သတ္တုနဲ့ လုပ်တာရှိသလို သွား အရောင်နဲ့ လုပ်တာလည်း ရှိပါတယ်။ အံသွားတွေ မှာ သတ္တုနဲ့ လုပ်တာက ပိုပြီး ခိုင်ခံ့တယ်၊ ရှေ့သွားတွေဆိုရင် ကြွေနဲ့ လုပ်တာက သဘာဝအတိုင်းဖြစ် တယ်၊ ပိုပြီး လှတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ၀ါးတဲ့၊ စားတဲ့ ဒဏ်ကိုတော့ ကြွေက ကောင်းကောင်း မခံနိုင်ဘူး၊ တစ်ခါတ လေ ပဲ့ထွက်တတ်တယ်။ ကြွေသွားနဲ့ လုပ်ထားရင် ဂရုစိုက်ရတယ်။ အားရပါးရ၀ါးလို့ မရဘူး။ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း သွားတွေလို သုံးလို့ မရဘူး။ ညှာတာရ မယ်။ မဟုတ်ရင် ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ရှေ့သွားပေမယ့် ပိုခိုင်ချင်ရင် ငွေရောင် ဒါမှမဟုတ် ရွှေရောင် လုပ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သဘာဝနဲ့တော့ ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ မသိသာချင်ဘူးဆိုရင် ဈေးသက်သာတာကတော့ ကော်နဲ့ လုပ်ထားတာက သက်သာတယ်၊
ကြွေနဲ့ လုပ်ရင် ပိုဈေးကြီးတယ်။
ယေဘုယျပြောရရင် ရှေ့သွားစိုက်တဲ့အခါ ကြွေသွားက ပိုကောင်းတယ်၊ ၀ါးတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေမှာ သတ္တုနဲ့ လုပ်တဲ့ သွားက ပိုကောင်းတယ်။
Q. အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုအမျိုးအစားနဲ့ သွားစိုက်လာကြပါသလဲ ဆရာ။
A. အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကြွေနဲ့ သွားစိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ကြွေထက် ပိုမာကျောတယ်ဆိုတဲ့ Zarconiumနဲ့ စိုက်တာက ပိုခေတ်စားလာပါတယ်။
Q. သွားအမြစ်တု ထည့်တဲ့နည်းနဲ့ သွားစိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို ဂရုစိုက်မှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုပါသလဲ ဆရာ။
A. သွားအမြစ်တုထည့်တဲ့နည်းနဲ့ လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း တစ်သက်လုံး သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြန်ပြနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မပြဘူးဆိုရင် သွားအမြစ်တုက သဘာဝ မဟုတ်တော့ နည်းနည်းလေး ရောင်တာနဲ့ လှုပ်လာတယ်။ သွားဖုံးရိုးကလည်း နိမ့်နိမ့်ကျလာတယ်။ အဲဒါ တွေကို သိဖို့ သွားဆရာဝန်နဲ့ အမြဲ ပြသနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သွားအမြစ်တုထည့်တဲ့နည်းနဲ့
သွားစိုက်တာက ဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေ လုပ်လို့ မရဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေ လုပ်လို့ မရဘူး။
Q. သွားစိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းသင့်ပါသလဲ ဆရာ။
A. ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးက ပုံမှန်လိုပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ သွားဆရာဝန်ဆီမှာ ပြသရင် သန့်ရှင်းအောင် ပိုဂရု စိုက်ပြီး လုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သွားမြစ် တုထည့်တဲ့နည်းနဲ့ သွားစိုက်တာနဲ့ တံတားထိုးပြီး သွား စိုက်တာတို့ လုပ်ပြီးရင် သွားဆရာဝန်ဆီ ပြပြီး ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
သွားတစ်ချောင်းမှ မရှိဘူးဆိုရင် အံကပ်တပ်ပြီး သွားစိုက်တာက ပိုကောင်းသလို ပိုလှတယ်။ အံကပ်က ဖြုတ်လို့ တပ်လို့ ရတယ်၊ မကောင်းတာက စားတဲ့ နေရာနဲ့ ၀ါးတဲ့ နေရာမှာ လှုပ်တုတ်၊ လှုပ်တုတ် ဖြစ် တယ်။ အဲဒါကို အကျင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ရတယ်။ အကျင့်ရသွားရင်တော့ မသိသာဘူး။ အံကပ်က တစ်သက်လုံး ကောင်းမယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ နည်းနည်း ချောင်လာရင် အသစ်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာပေးရရင် ဖိနပ်စီးသလိုပါပဲ။ ဖိနပ်မှာလည်း တစ်သက်လုံး စီးလိုရတဲ့ ဖိနပ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သွားပါများရင် ဖိနပ် ပြတ်တယ်၊ ပါးတယ်။ ဒီလိုပဲ ကိုယ် စားတဲ့၊ ၀ါးတဲ့ အစာက များရင် များသလို စိုက်ထားတဲ့ သွားတွေက ပြုန်းလာနိုင်တယ်၊ ချောင်လာနိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သဘာဝကို လွန်ဆန်လို့မှ မရတာကိုး။ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း သွားတောင် ပါးပါးလာတယ်၊ အံတိုလာတယ်ဆိုတဲ့ စကားရှိတယ်။ ၀ါးပါများလေ၊ အံတိုလေ၊ အသက်ကြီးလေ အံတိုလေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
(Healthy Life ဂျာနယ် အမှတ် (၆၅) တွင်ပါရှိသည့် ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးကို အများပြည်သူအကျိုးရှိစေရန် ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။)
Posted by Alex Aung at 7:25 AM
Labels: Health, Q&A, အင်တာဗျူး